We Love Myanmar Archives - We Love Myanmar
Tag Archives: We Love Myanmar
ROHINGYA : myths & facts. (1) Rohingyas are not Burmese. They called themselves as Rohingya. [...]
မျိုးချစ်စိတ်ရှိသူတို့၏စိတ်ဓါတ်အမှန် မိမိလူမျိုးနှင့် မိမိတိုင်းပြည်ကို စစ်မှန်စွာ ချစ်သူတို့အနေဖြင့် မိမိလူမျိုးနှင့် မိမိတိုင်းပြည်ကို တစ်ဦးတစ်ယောက်က စော်ကားတဲ့စကားပြောလိုက်တာနဲ့ အနည်းအများ ခံစားချက်ရှိကြပါတယ်။ ထိုနည်းအတူ သူတပါးလူမျိုးနှင့် သူတပါးတိုင်းပြည်ကို နှုတ်အားဖြင့်ဖြစ်စေ စော်ကားတဲ့စကား ဘယ်တော့မှ ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ [...]
Improving Openness and Honesty in Myanmar Society
မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ရာစုနှစ်အတွင်း တဖြည်းဖြည်နဲ့ ပွင့်လင်းရိုးသားလာတာကို တွေ့လာရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ပွင့်လင်းလာတာ ကောင်းတဲ့အချက်ရှိသလို မကောင်းတဲ့အချက်လဲ အများကြီးရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ နောက်ပိုင်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်တွင်း အနုပညာရှင်များတောင်မှ မိမိကိုယ်ရေးအကြောင်းကို ပရိတ်သတ်ကို [...]